3 Ọ bụ mgbe nke a gasịrị ka Job meghere ọnụ ya wee malite ịkọcha ụbọchị a mụrụ ya.+ 2 Job wee sị: 3 “Ka ụbọchị a mụrụ m laa n’iyi,+ Ọbụna abalị ahụ mmadụ sịrị, ‘A tụrụwo ime nwa nwoke!’ 4 Ka ụbọchị ahụ ghọọ ọchịchịrị. Ka Chineke ghara isi n’elu jụọ ase ya, Ka ìhè gharakwa inwu n’ụbọchị ahụ. 5 Ka ọchịchịrị na oké itiri weghara ya. Ka ígwé ojii nke mmiri ozuzo kpuchie ya. Ka ihe ndị na-eme ka ụbọchị gbaa ọchịchịrị menye ya oké ụjọ.+ 6 Ka itiri weghara abalị ahụ;+ Ka ọ ghara iso ụbọchị ndị ọzọ dị n’afọ ṅụrịa ọṅụ; Ka a ghara ịgụnye ya n’ọnwa ndị e nwere. 7 Lee! Ka abalị ahụ tọgbọrọ n’efu; Ka a ghara iti mkpu ọṅụ ọ bụla na ya.+ 8 Ka ndị na-abụ ụbọchị ọnụ kọchaa ya, Bụ́ ndị dị njikere ịkpọte Agụ Iyi.*+ 9 Ka kpakpando chi ọbụbọ ya gbaa ọchịchịrị; Ka o chere ìhè, ma ka ìhè ghara ịdị; Ka ọ gharakwa ịhụ ìhè chi ọbụbọ. 10 N’ihi na o mechighị ụzọ afọ nne m,+ Wee gbochie anya m ịhụ nsogbu. 11 Gịnị mere anwụghị m n’afọ?+ Gịnị mere ekubighị m ume ozugbo m pụtasịrị n’afọ? 12 Gịnị mere ikpere ji nabata m, Gịnịkwa mere e ji nwee ara+ m ṅụrụ? 13 N’ihi na ugbu a m gaara edinarawo ala, ghara inwe nsogbu;+ M gaara arahụwo ụra; m gaara anọ na-ezu ike,+ 14 Mụ na ndị eze na ndị ndụmọdụ nke ụwa,+ Ndị na-ewuru onwe ha ebe tọgbọrọ n’efu,+ 15 Ma ọ bụ, mụ na ndị isi bụ́ ndị nwere ọlaedo, Ndị na-ekpoju ọlaọcha n’ụlọ ha; 16 Ma ọ bụ, dị ka ime pụrụ apụ+ na nzuzo, agaraghị m adị ndụ, Dị ka ụmụaka na-ahụtụghị ìhè.+ 17 N’ebe ahụ ka ndị ajọ omume na-adịkwaghị enwe nchegbu,+ N’ebe ahụkwa ka ndị ike gwụrụ nọ na-ezu ike.+ 18 Ndị mkpọrọ niile na-enwekwa ntụsara ahụ́; Ha adịghị anụ olu onye na-amanye ha ịrụ ọrụ.+ 19 Onye ukwu na onye nta bụ otu ihe ahụ n’ebe ahụ,+ A na-emekwa ka ohu nwere onwe ya n’aka nna ya ukwu. 20 Gịnị mere o ji enye onye nọ ná nsogbu ìhè, Na-enyekwa ndị ihe na-ewute ná mkpụrụ obi+ ndụ? 21 Gịnị mere e ji nwee ndị na-echere ọnwụ, ma ọ dịghị abịara ha,+ Ọ bụ ezie na ha na-egwu ala maka ya karịa ka ha na-egwu maka akụ̀ zoro ezo? 22 Ndị na-aṅụrị ọṅụ ruo n’ite egwú ọṅụ, Ha na-enwe aṅụrị n’ihi na ha nwetara ili. 23 Gịnị mere o ji enye mmadụ ìhè, bụ́ onye e zochiri ụzọ ya ezochi,+ Onye Chineke gbachibidokwara ogige?+ 24 N’ihi na m na-ama ọsụ tupu mụ erie nri,+ Mkpu ákwá m na-eti na-ezo dị ka mmiri;+ 25 N’ihi na atụwo m ihe na-emenye ụjọ egwu, ọ na-adakwasịkwa m; Ihe m na-atụ egwu na-abịakwara m.+ 26 Ọ dịghị mgbe m na-enweghị nchegbu, ọ dịghịkwa mgbe obi ruru m ala, Ọ dịghịkwa mgbe m zuru ike, ma nsogbu na-abịa.”
N’asụsụ Hibru, ‘Levayatan.’